Vaovao momba ny fitsapana nohavaozina - princetoncovid.org
Vaovao momba ny fitsapana nohavaozina
Kit ho an'ny COVID-19 maimaim-poana ao an-trano no misy ho an'ny mponin'i Mercer County 14 taona no ho miakatra. Online registration dia ilaina. Mailaka HomeTesting@mercercounty.org misy fanontaniana.
Ireo mponina any Princeton maniry fitsapana COVID ho an'ny zaza latsaky ny 14 taona dia atoro hevitra mba hanamarina amin'ny mpitsabo aretin-jaza.
Ankoatry ny, Farmasia integrative Santé ao amin'ny 200 Nassau Street dia manome COVID-19 fitsapana 10 maraina ka hatramin'ny 2 ora alatsinainy hatramin'ny alakamisy. kitiho eto misoratra anarana. Ny fanampiana dia misy amin'ny teny anglisy sy espaniola amin'ny fiantsoana (609) 921-8820.